Posted by ခြေလှမ်းသစ် at 2:49 PM 18 comments
လူတယောက်နှင့် တယောက်၊ အကြောင်းတရား မတိုက်ဆိုင်မှူကြောင့် ပြသနာ ဖြစ်ကာ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြတယ်၊ တဆက်တည်းမှာပဲ ထိုလူနှစ်ယောက်ဟာ စိတ်မထိန်း နိုင်ပဲ သတ်ပုတ်ကြတယ်၊ အဲ့ဒါကို ‘ရန်’ ဖြစ်ကြတယ်လို့ လူတွေက သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ် ….. အဲ့ဒီအခါ ရန်ဖြစ်ကြတဲ့ လူနှစ်ယောက်ဟာ ရန်သူ တွေ ဖြစ်သွား ကြတာပေါ့ …… နောက်ပြီး တယောက်က တယောက်ကို ရန်သူ လို့ သတ်မှတ် လိုက်ကြတယ် ….. ဒါဟာ သဘာဝ တရားပါပဲ …..
(ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှူ အပေါ်နဲ့ ပြသနာ အပေါ် မူတည်ပြီး ရန်သူလို့ သတ်မှတ်တဲ့ ကာလ တွေဟာ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်၊ နောက်ပြီး အချင်းချင်း ပြသနာ အပေါ် မူတည်ပြီး၊ ကြေအေး သွားကြတဲ့ အခါမှာလည်း သူတို့ဟာ ရန်သူ အဖြစ်ကနေ သာမာန် လူများသော်လည်းကောင်း မိတ်ဆွေများ သော် လည်းကောင်း ပြန်လည် ပြောင်းသွား နိုင်ကြပါတယ်)
လူနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်နေတဲ့ ကာလမှာ တယောက်နှင့် တယောက်က အပြန်အလှန် ရန်သူလို့ သတ်မုတ် ခေါ်ဝေါ်ကြတာ ဘယ်သူ့မှာ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ထင်ကြပါသလဲ? ဒါဟာ သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ (ဘက်နှစ်ဘက်ရဲ့) လွပ်လပ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် သတ်မှတ်ခြင်း ပဲလေ ….. ဒီနေရာမှာ ရန်သူလို့ အပြန်အလှန် သတ်မှတ်ကြတာဟာ၊ မတရား ဘူးလို့၊ မှားတယ် လို့ ဘယ်အရာနဲ့ တိုင်းတာလို့ ရမှာလဲ? ဘယ်သူ့က မခေါ်သင့် ဘူးလို့ အပြစ်တင်လို့ ရမှာလဲ?
ကမ္ဘာနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြောရမယ် ဆိုရင် နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံ စစ်ဖြစ်ကြတယ် ဆိုရင်လည်း ရန်သူနိုင်ငံ များလို့ သတ်မှတ်ကြမှာပဲ၊ ဘာကြောင့် ဆိုတော့ ရန်ဖြစ်နေကြတာကိုး၊ စစ်တိုက်တဲ့ အသုံးအနှုံး အရတော့ စစ်ဘက်များလို့ တမျိုး သတ်မှတ်နိုင်ပါသေးတယ်၊ ဒီနေရာမှာ တဘက်လူကို ငဲ့ညာပြီး ချစ်သူများလို့ အပြန် အလှန် တင်စားမဲ့ နိုင်ငံများ/လူများ ရှိကြမယ်လို့တော့ ကျွန်တော်မျိုး မထင်ကြောင်းပါ။
ရန်သူ ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကို တင်ပြခြင်တာက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်နေလို့ပါ ……… မြန်မာပြည် သမိုင်း တလျှောက်မှာ ကျောင်းသားနှင့် ပြည်သူ ပူးပေါင်း၍ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးကြီးကို ပုန်ကန် တော်လှန်ရန် နှလုံးရည်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ လက်ရုံးရည်ဖြင့် လည်းကောင်း တိုက်ပွဲပေါင်း မြောက်များစွာ ဆင်နွဲခဲ့ကြပါတယ်၊ ဆင်နွှဲနေကြဆဲပါ၊ အဲ့ဒီအခါ လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်ကို ယုံကြည်ကြသော ကျောင်းသား ပြည်သူများက လက်နက်စွဲကိုင်၍၊ တော်လှန်ရေး တပ်ဦးများအဖြစ်/စစ်တပ် တစ်တပ်အဖြစ်၊ ရပ်တည်ကာ တိုက်ပွဲ ၀င်လျှက် ရှိနေပါတယ်၊ ဒီအခြေ အနေမျိုး အထိ တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်မှာ တော်လှန်ရေး သမားများက ပြည်သူများ ဘက်မှ အာဏာရှင် စနစ်ကို အမြစ်ဖြုတ် ရန်နှင့် အာဏာရှင် များဘက်မှလည်း သူတို့ အာဏာ ဆက်လက် တည်မြဲရေး အတွက် တဖက်နှင့် တဖက် ရန်ဖြစ်/စစ်ဖြစ် နေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာရှင်များ ဘက်မှ လက်နက်မဲ့ ပြည်သူများအား လည်းကောင်း၊ လက်နက်ရှိ ပြည်သူများအား လည်းကောင်း တိုက်ပွဲ သဏ္ဍန် ပေါင်းစုံဖြင့် တိုက်ခိုက် လာခဲ့သည်မှာ အနှစ်နှစ် အလလကပင် ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီနေရာမှ နှစ်ဘက် အုပ်စုများက တဘက်နှင့် တဘက်ကို၊ မိမိတို့၏ ရန်သူများဟု မသတ်မှတ်ပဲ မိတ်ဆွေများဟု သတ်မှတ်နေပါက၊ သတ်မှတ်သည့် ဘက်က ရှုံးနိမ့်လိမ့်မည်မှာ မုချဧကန်ပါ၊ စစ်ပွဲတို့ မည်သည်မှာ ခလေး၊ လူကြီး၊ မိန်းမ၊ ဟူ၍ ရွေးချယ်ခွင့် မရှိပဲ မိမိအသက်ကို ကာကွယ်ရန်နှင့် မိမိစစ်ပွဲ အောင်နိုင်ရန် အသေအကြေ တိုက်ခိုက်ကြခြင်းပါ။
အခုလို မြန်မာစစ်အာဏာရှင်များနှင့် ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများ/ကျောင်းသား ပြည်သူများ ဖြစ်နေသော စစ်ပွဲတွင် မည်သည့် ဘက်က ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ/အသေအကြေ တိုက်ခိုက်နေသလဲ ဆိုတာ သမိုင်း အထောက် အထားများက သက်သေ ပြနေပါတယ်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်နေ၀င်းကြီးက ကျောင်းသား သမဂ အဆောက်အဦးကြီးကို မိုင်းခွဲ၍ မညှာမတာ ဖျက်ဆီး ကာ ကျောင်းသူ/သား များကို သေကြေ စေခဲ့ပါတယ်၊ ကျောင်းသူ/သား များစွာကိုလည်း ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်၊ အကယ်၍ စစ်အာဏာရှင်များကသာ ကျောင်းသူ/သားများကို ရန်သူဟု မသတ်မှတ်ခဲ့ပါက၊ ဤသို့ တိုက်ခိုက်ခဲ့မည် မဟုတ်ပါ၊ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး တွင်လည်း အခြေခံပညာ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းက ကျောင်းသူ/သား ခလေးများကိုပင် အသေအကြေ တိုက်ခဲ့တာတွေဟာ သမိုင်းမှာ အထင်အရှားပါ၊ နိုင်ငံတကာ၏ စံချိန် သတ်မှတ်ချက် အရ အသက် ၁၈ နှစ် အောက် ခလေးများဟာ လူမမယ် တွေပါ၊ သို့သော် စစ်အာဏာရှင်များက သူတို့၏ တိုက်ပွဲတွင် ခလေးဟု မသတ်မှတ်ခဲ့ပါ၊ ကျောင်းသား လူငယ်များနှင့် ပြည်သူ/သားများကို သူတို့၏ ရန်သူများသာ သတ်မှတ်ခဲ့၍ ယခုလို တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းပါ။
မြန်မာ့ သမိုင်းမှာ အဖေကို ဖမ်းမမိလို့ မိခင်နှင့် နို့စို့အရွယ် သမီးငယ်ကို ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာလဲ အထင်အရှားပါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများကို ဖမ်းဆီးသွား၍ အကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သာ မီးဖွားစေခဲ့တာလည်း မေ့ပျောက် လို့ မရနိုင် စရာတွေပါ။
စစ်ပွဲတပွဲတွင် ရန်သူကို ရန်သူဟု စစ်အာဏာရှင်များ သတ်မှတ်ပုံမှာ အရမ်း တိကျ လွန်းတယ်ဆိုတာကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးကလည်း သက်သေ ပြခဲ့ပါတယ်၊ မိမိတို့ ကိုးကွယ်နေသော ရဟန်းတော်များ ကိုပင် ရန်သူဟု အသိအမှတ်ပြုကာ လမ်းဘေးမီးတိုင်များတွင် ကြိုးတုန်ချည်နှောင်ကာ တမျိုး၊ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချကာ တဖုံ၊ ထင်ထင်ရှားရှား သတ်ဖြတ်ပုံက တမျိုး၊ အမျိုးမျိုး သက်သေ ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ရန်သူ တဖက်နှင့် တဖက် အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ အခါ တဖက်သားကို အနိုင်ရဖို့ရန် နည်းလမ်း မျိုးစုံကို အသုံးပြုကြတာဟာလည်း ရန်ဖြစ်ခြင်း/စစ်တိုက်ခြင်း/တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ရဲ့ သဘောသဘာဝပါပဲ၊ ထိုနည်းဖြင့် စစ်အာဏာရှင်များ၏ ရန်သူများ ဖြစ်ကြတဲ့ အတိုက်အခံ အင်အားစုများ/ ပြည်သူများ/ ကျောင်းသားများ/ ရဟန်းများ ကို အာဏာရှင်များက အင်အား ချည့်နဲ့ သွားစေရန် နည်းမျိုးစုံဖြင့် တိုက်ခိုက်ခြေမှုန်း နေသည်မှာ လက်တွေ့မြင်တွေ့ နေရပါတယ်။
ပြည်သူများ၏ ပညာရေး၊ လူမှူရေး၊ စီးပွါးရေး၊ ဘာသာရေး ဘက်ပေါင်းစုံအား၊ အားအင်ချည့်နဲ့ သွားအောင် တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသူ/သား ပြည်သူများ ကလည်း မိမိတို့၏ တဖက်လူ/ရန်သူကို၊ ရန်သူဟု သတ်မှတ်နိုင်ရန်မှာ အလွန်အရေးကြီး နေပါတယ်၊ ဒါမှသာ ရန်သူကို အောင်နိုင်ရန် တိုက်ခိုက်နိုင်မည့် အင်အားများ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ .. ကျွန်တော့် အဖိုး တပ်မတော်မှတ်တမ်းရုံးက အရာခံဗိုလ်ဟောင်း ဦး-င်ေ-ာင်က ၈၈ အရေးတော်ပုံ ကာလတုံးက ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ စကားလေးကို အမှတ်ရသွားတယ် …. …. “ဟေ့ကောင် …. မင်းတို့လို လမ်းပေါ်မှာ လက်ခလေးတွေ ထောင်ရင်း ဒို့အရေးလုပ်နေတဲ့ လူတွေဟာ၊ စစ်တပ်ရဲ့ ရန်သူပဲကွ…. မင်းတို့က …. မင်းတို့ရဲ့ ရန်သူကို တိုက်ချင်ရင် ဒီအတိုင်း တိုက်လို့ မရဘူး….လက်နက်ရှိတဲ့ ရန်သူကို လက်နက်နဲ့ တိုက်မှ ရမယ်ကွ ……. ရန်သူကို ရန်သူလို့ သတ်မှတ်နိုင်ရမယ်ကွ” …….
စစ်အာဏာရှင်များကို ရန်သူတပ်၊ နောက်လိုက်များကို ရန်သူ့လူများဟု ပြောဆိုမိသည့် ကျွန်တော့်အား မကျေ မနပ်ဖြင့် ခွန်းတုံ့ပြန်ခဲ့သော လူတစ်ယောက်အား ပြန်လည် ချေပခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
ဤနေရာမှာ စစ်တပ်တွင်းက ပြည်သူများဘက်မှ ရပ်တည်နေသော ပြည်သူ့စစ်သားများကို မဆိုလိုပေ ….
(မှတ်ချက် - ဤပိုစ့်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးလိုပါက ကွန့်မန့်တွင် လိုအပ်သလို ဆွေးနွေးနိုင်ပါကြောင်း)
Posted by ခြေလှမ်းသစ် at 9:18 AM2comments
ဘူတန် က သူငယ်ချင်း တယောက် အတွက် ကားလိုက်ဝယ်ပေးဖို့ မနေ့က ကားအရောင်းဆိုင် တွေကို လျှောက်ကြည့် ခဲ့တယ်၊ တဆိုင်ဝင် တဆိုင်ထွက်နဲ့ ညနေ ၅ နာရီလောက်မှာ ကားအရောင်းဆိုင် တခုကို ရောက်ခဲ့တယ်၊ အမေရိကားရဲ့ အပူချိန်ကလဲ ဘယ်လောက်ပဲ အဲယားကွန်းတွေ ဖွင့်ဖွင့် ကားထဲကနေ အပြင်ကို ခဏလေး ထွက်လိုက်တာနဲ့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း မခံနိုင်လောက်အောင် ပူအိုက်လာခဲ့တယ်၊ တကယ်တော့ ဒီအပူချိန် လောက်ဟာ မြန်မာပြည်နဲ့ အာရှမှာဆို စာမဖွဲ့လောက် ပါဘူး၊ အမေရိကားရဲ့ အအေး ရာသီကို ရင်ပါးလာတာနဲ့ အမျှ လူပါးတွေကလည်း ၀ ၀ လာတယ်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း သတိထားမိပါတယ်လေ မြန်မာပြည်မှာဆို လက်ရှိအစိုးရ အုပ်ချုပ်နေမှူမျိုးနဲ့ ကိုယ်တွေ ဘ၀ ဆယ်သက်သာ လည်သွား လိမ့်မယ် အခုလို အဲယားကွန်း မပြောနဲ့ ၀ဲယားကွန်းတောင် အနားကပ်လို့ ရမှာ မဟုတ်၊ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါတွေက ပြည်သူတွေ မိုလို့ပါ၊ သူတို့ အမျိုးတွေဆို နိဗ္ဗာန်မှာ နေရတာ ထက်တောင် သာနေသေးတယ်၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ချွေးတွေ သွေးတွေနဲ့ လယ်ကွင်းထဲမှာတောင် နန်းတော်ကြီးတွေက ဟီးနေလို့၊ သူတို့ အကြောင်းတွေချည်း ပြောနေလို့ လိုရင်းကိုတောင် မရောက်တော့ဘူး တော်ပီ နောက်များ ကြုံမှပဲ ဆက်ပြောတော့မယ်။
အဲ့ဒီ ကားဆိုင်းလေးမှာ သူငယ်ချင်း အကြိုက် ကားလေး တစီး တွေ့ခဲ့တယ်၊ Mazda Protege 2001 လေးပါ mileage က 75000 ကျော်လေးပဲ ဈေးနှုံးကလည်း $3700 ကားတစီးလုံးရဲ့ ဘော်ဒီကလည်း အရမ်း လတ် နေသေးတယ်၊ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်သား မတတ် တတတ်နဲ့ အတွင်းအပြင် အကုန်းလုံး လျှောက်ကြည့် နေတော့တယ်၊ မသိရင်တော့ ကားအကြောင်း အရမ်း နားလည်တဲ့ မြန်မာပြည်က ကားပွဲစားတွေပေါ့၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေကို ဘယ်သူတွေလဲ ဘယ်ကလဲ ဆိုတာတော့ ကားဆိုင်မှာ ရှိတဲ့ လူတွေ တယောက်မှ မသိသေးပါဘူး၊ မသိသေးဆိုလဲ ကိုယ်တွေက ဘယ်သူ့ကိုမှ မမေးသေး မမြန်းသေးဘဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ လိုက်သာ ကြည့်နေ ခဲ့တာလေ။
ခဏကြာလာတော့ ကိုယ်လည်း မျက်နှာ အလိုလို ပူလာတယ် သူငယ်ချင်းကို မေးကြည့်တော့ သူက အဲ့ဒီကားလေးကို သဘောကျတယ်တဲ့ ဒါနဲ့ ဆိုင်ထဲကို သွားမေးကြည့် ကြမယ်လို့ နှစ်ယောက်သား တိုင်ပင်ကာ ဆိုင်ထဲ ၀င်ခဲ့ကြတယ်၊ ဆိုင်ရဲ့ အရောင်း ကောင်တာမှာ ဆိုင်ရှင်လို့ ထင်ရတဲ့ လူတယောက်နဲ့ တခြား လူနှစ်ယောက်ကို တွေ့ခဲ့တယ်၊ ကိုယ်တွေကို တွေ့တွေ့ချင်းပဲ Asian တွေ ဆိုတာ အလိုအလျှောက် သိနေတယ်နဲ့ တူတယ်၊ လူငယ်တယောက်က လှမ်းမေးလိုက်တယ်၊ မင်းတို့ကို ကြည့်ရတာ လူရိုးလေးတွေ လိုပဲတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံကလဲပေါ့။
သူငယ်ချင်းက သူဟာ ဘူတန်နိုင်ငံက ဖြစ်ကြောင်း ပြောတော့ လူငယ် တယောက်က ဘူတန်ကို မသိသေး၊ ဒီတော့ ကျန်လူကြီး နှစ်ယောက်က သူကို ကိုယ်တွေ အစား ရှင်းပြလိုက်တယ် အန္ဒိယနဲ့ တရုတ်ပြည် ကြားက နိုင်ငံလေ ဆိုတော့ သူငယ်လည်း လျှင်မြန်စွာနဲ့ သဘော ပေါက်သွားခဲ့တယ်၊ ဩော် …. သိပြီ … သိပြီ တဲ့လေ … အတော် သဘော ပေါက်လွယ် တဲ့ လူငယ်လေးပါ …
ကိုယ့်အလှည့် ရောက်လာပြီလေ ..... ကိုယ်လဲ ဘယ်ရမလဲ အားတင်း ထားတာပေါ့ ငါ့နိုင်ငံကတော့ ကမ္ဘာမှာ နာမည်ကြီးလေ မကြာသေးခင်ကပဲ … ရွှေဝါရောင် ကိုယ်တော်တွေ မ စ လို့ မြန်မာကို ကမ္ဘာက သိခဲ့ပြီးပြီ ထို့အတူ အမေရိကန် ကဆို တတိုင်းပြည်လုံး သိကြလို့ ခဏ ခဏ တောင် လူတွေ့တိုင်း မေးနေကြတယ်၊ BurmaVJ က အော်စကာ ရမယ် ထင်လား? ဘယ်လို ထင်ပါသလဲ? ကိုယ်တွေလည်း အမြဲတမ်း ၀င့်ကြွား ခဲ့တာပေါ့ ……. နောက်ထပ် နာမည်ကြီးနေတာ တခုက ကမ္ဘာ့ နာမည်အဆိုးဆုံး အရက်စက်ဆုံး အရမ်းကားဆုံး လူမိုက်ကြီး ငသန်းရွှေကြောင့်လေ၊ သူရခဲ့တဲ့ ဆုက မြန်မာကို ကမ္ဘာက ပိုမိုသိလာတာလဲ တခုအပါ အ၀င်ပါပဲ … သူ့ကိုယ်တောင် ပြန်ပြီး ကျေးဇူးတင်ရ မလိုတောင် ဖြစ်နေပီ ……
ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်က မြန်မာပြည်က လာကြောင်း ပြောနေတာပေါ့ … အခုနက လူငယ်ပဲလေ .. လူငယ်ပီပီ ဗဟုသုတ ရချင်တယ် ထင်ပါဘိ … Burma ဆိုတာ ဘယ်မှာလဲ Burma ဆိုတာ ဘာလဲ Burmese ဆိုတာ ဘယ်သူ တွေလဲ? … ထုံးစံအတိုင်း အခုနက လူကြီး နှစ်ယောက်ကပဲ ကိုယ့်အတွက် ရှေ့နေ လုပ်ပေးလိုက် တယ် .. ဗမာပြည်က ထိုင်းနဲ့ အန္ဒိယ နားက နိုင်ငံပေါ့ .. ဒါပေမယ့် ဒီတခါတော့ ကိုယ်ကပဲ ကံဆိုးလို့လား? ဒီခလေးပဲ အသုံး မကျတလား မသိပါ .. ဗမာပြည်ကို သူ့ခေါင်းနဲ့ မျက်စိထဲမှာ ဘယ်လိုမှ ပုံရိပ် မထင်တော့ပါ ….
နဂိုက တင်းထားတဲ့ အားတွေ အကုန်လုံး သဲထဲ ရေသွန် ဖြစ်ခဲ့ပြီ၊ ဘူတန်က သူငယ်ချင်း ကိုလည်း အရမ်း မျက်နှာ ပူလာပြီလေ၊ အရင်ရောက်နှင့် နေတဲ့ လူအဖြစ် ကိုကချည်း အမြဲတမ်း ကြွားဝါခဲ့တာ၊ မြန်မာ့ အရေးတွေကို အမေရိကန်တွေ သိအောင် ဘယ်လို ကြိုးစား နေသလဲ? ဘာတွေ ဆက်လုပ်မယ်ပေါ့ …. အခု ဒီခလေး လုပ်လိုက်လို့ ကျနော့် မရှိတဲ့ အရှက်တွေ ဗွမ်းဗွမ်း ကွဲကုန်ပြီ …. နဂိုက နေပူထဲမှာ ကားလိုက်ကြည့် နေရတာက တကြောင်း၊ ကိုယ့်နိုင်ငံကို မသိသေးတဲ့ ခလေးလေးကြောင့် တကြောင်း၊ စိတ်ထဲမှာ ဒေါသတွေ အလိုလို ထွက်လာခဲ့တယ်၊ ဒီလိုပဲ မှင်သေသေနဲ့ အကြံထုတ်ရန် ဆေးလိပ်တလိပ်ကို မီးညှိရင်း ကောက်ဖွာမိလိုက်တယ် …. ဆေးလိပ်ကလည်း တယ်အကျိုးပေး သကိုး ရုပ်တရက် ဆိုသလိုပဲ ခေါင်းထဲက အကြံတွေ ထွက်လာတယ် … ဘူတန်က သူငယ်ချင်း ကလဲ စကားကောင်း နေတာ မသိရင် အခုမှ အမျိုးတွေ ပြန်စုံနေကြသလိုပဲ …. မထူးတော့ပါဘူး .. ရိုင်းတယ်လို့ ထင်ချင်လည်း ထင်ပါစေတော့ သူတို့ စကားဝိုင်းကို By the way နဲ့ ၀င်နှောင့်ယှက် လိုက်တယ် ….
ကျနော်က သူတို့ အားလုံးကို မေးလိုက်တယ် …. “မနေ့ညက Eagle လမ်းနဲ့ Kossuth Ave ထောင့်မှာ Asian Gang အုပ်စုနဲ့ LES Gang တွေ ရန်ဖြစ်ကြရင်း ခလေး ၆ ယောက်ကို ရဲက ဖမ်းမိသွားတယ်လေ .. ခင်ဗျားတို့ အဲ့ဒါကို သိကြရဲ့လား? သူတို့ သုံးယောက်လုံးက အားရပါးရ တပြိုင်တည်း ၀ိုင်းဖြေခဲ့ကြတယ် သိတယ် … သိတယ် … ဒီခလေးတွေက Proctor High School ကလေ …. Proctor High School ဆိုတက ကျနော်တို့ နေတဲ့ မြို့က လူဆိုး စာရင်းဝင် အထက်တန်းကျောင်း လေးပါ မြန်မာနိုင်ငံက ရောက်လာတဲ့ ခလေးတွေလည်း ဒီကျောင်းမှာပဲ အဓိက တက်ရောက် နေကြတာလေ၊ ဒါနဲ့ သူတို့ သုံးယောက် အဖမ်းခံ ထိခဲ့တဲ့ ခလေးတွေကို ဘယ်လောက် သတ်ပစ်ချင် နေကြသလဲတော့ မသိပါ၊ သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ ကျနော်ပြော လိုက်တာကို ကြားကြားခြင်းပဲ ဒေါသအရိပ် အရောင်တွေနဲ့ အမေရိကန် Gang က 16 နှစ်အောက် မိန်းခလေး တယောက်ကို ၀ိုင်းရိုက်လို့ အခု ဆေးရုံ တင်ထားရကြောင်း Asian Gang က ခလေးတွေကို Juvenile အချုပ်မှာ ပို့ထားကြောင်း သူတို့ကပဲ တရစပ် ပြောပြနေခဲ့တယ် … တဆက်တည်းမှာပဲ ခလေးလေးက စကားဝိုင်းကို ဖျက်လိုက်တာက ….. ‘ဒါနဲ့ နေပါဦး.... ဒီခလေးတွေနဲ့ မင်းလာတဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ..... ဒီ Gang နဲ့က ဘာဆိုင်လို့ လို့လဲ? လို့’ ကျနော့်ကို ပြန်မေးခဲ့တယ်၊ ကျနော်က - ဒီတခါတော့ စကားကို ဟိုလှည့် ဒီလှည့် ပြောလို့ မရ တော့ဘူး …..မိမိဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားခဲ့တဲ့ အခုနက မေးမိတဲ့ မေးခွန်းကို ပြန်လည် ဖြေကြားဖို့ အချိန် ရောက်လာ ပြီလေ။
ကျနော်က ‘မင်း - သူတို့ကို သိတယ် မဟုတ်လား?’ ခလေးက ‘ဟုတ်ကဲ့ သိပါတယ် သူတို့က ကရင်ကလေး တွေလေ’ …. ကျနော်က ‘ဟုတ်ပါတယ် …. ငါလဲ သူတို့နဲ့ အတူတူပါပဲ.... ငါတို့က ဗမာပြည်က ရောက်လာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေလေ’ ….. ‘ငါတို့ အားလုံးက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကွ’ ကျနော့် စကားပြီးပြီးချင်း မှာပဲ ကား အရောင်းဆိုင်က ဆိုင်ရှင်နဲ့ အတူ သူတို့ သုံးယောက်သား ငြိမ်ချက်သား ကောင်းသွား ကြတယ် ….. ကျနော် ဘယ်နိုင်ငံက လာသလဲ၊ ဘာလူမျိုး ဆိုတာလဲ သူတို့ အားလုံး သိသွားကြတယ် …….
မြန်မာကို ကမ္ဘာက သိအောင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အားလုံး ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးပမ်း နေကြပုံကို ဇတ်လမ်းလေး တပုတ်ဖြစ်အောင် ရေးလိုက်ရင်း …..
မနေ့ တနေ့က ကျနော်တို့ မြို့မှာ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွါးရင်း Asian Gang အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံသား ခလေးများ အဖမ်းခံ ခဲ့ရပါတယ် … ဒါကို ဇတ်လမ်းလေး ရအောင် ရေးမိတာပါ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ လင့်ခ်တွင် သွားရောက် ဖတ်ရှူ့နိုင်ပါတယ် ……
Posted by ခြေလှမ်းသစ် at 11:43 AM 8 comments
7 July Statement of IFBNC
(7) July Statement of IFBNC (Bur)
Posted by ခြေလှမ်းသစ် at 8:44 AM 1 comments
ငါတို့ ပိုင်တာ အနုပညာကို ချစ်တဲ့လူ
သူတို့ ပိုင်တာ လူသေစေတဲ့အနုမြူ
ငါတို့ ချစ်တာ စစ်မှန်တဲ့ လွပ်လပ်မှူ
သူတို့ လုပ်တာ လူသေနေလည်း လစ်လျူရှူ
ငါတို့ မုန်းတာ လူစိတ်မရှိတဲ့ စစ်ခွေးများ
သူတို့ ဖြုန်းတာ ပြည်သူ့ငွေလည်း အမှူမထား
ငါတို့ တောင်းတာ အမှောင်ပြည်အတွက် လူ့အခွင့်အရေး
သူတို့ ရောင်းတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနှစ်အသွေး
ငါတို့က ဘာကောင်တွေလဲ .........
ခဏတာ ရိုင်းချင်ရိုင်းမယ် တစ်သက်တာတော့ ထင်ရာမစိုင်းတဲ့
အမုန်းတွေကတော့ ရှိနေသေးတယ်။ ။
Posted by ခြေလှမ်းသစ် at 4:36 PM 1 comments
ယူတီကာမြို့၏ ၇ ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ ဒုက္ခသည်များနေ့ အခမ်းအနား
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်ပြည်နယ်ရှိ ယူတီကာမြို့ ကလေးသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြေချ နေထိုင်ရန် ရောက်ရှိလာသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ အများစု နေထိုင်ရာ မြို့တမြို့ အဖြစ် ထင်ရှား ကျော်ကြား လာခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်၊ တခြားနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားများ နည်းတူ အရင့်အရင် ကတည်းက ရောက်ရှိလာခဲ့ ကြပြီး ယနေ့ထိ တိုင်လည်း ဆက်လက် လာရောက် နေထိုင်ကြ ဆဲပါ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများ မှာတော့ 1999 ခုနှစ်မှ စတင် ရောက်လာခဲ့ကြပြီး ယနေ့ထိတိုင် ဆက်လက် လာရောက် နေကြဆဲပါပဲ၊ လက်ရှိ အခြေချ နေထိုင်ရန် ရောက်ရှိလာနေသော နိုင်ငံသား အသစ်များမှာတော့ ဘူတန်နိုင်ငံရှိ နီပေါလ် လူမျိုးများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အမေရိကား နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာမှ ဒုက္ခသည်များကို အခြေချ နေထိုင်ရန် နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ တိုက်ရိုက် တာဝန်ယူပြီး၊ အမေရိကန် နိုင်ငံအတွင်း ဒုက္ခသည်များ၏ အရေးရာ ကိစ္စများကို ဆက်လက်တာဝန်ယူရန် အမေရိကားရှိ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ (NGOs)နှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန် ယူလျှက် ရှိနေပါတယ်၊ ထိုအဖွဲ့အစည်းများတွင် ဒုက္ခသည်များ အတွက် သီးသန့်ဖွဲ့စည်းထားသော အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း (NGOs)များမှာ ဒုက္ခသည်များ၏ အရေးကို များစွာ အကူအညီ ပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိလာရပါတယ်။
နယူးယောက်ပြည်နယ်ရှိ ယူတီကာ မြို့တွင်လည်း ထိုနည်းတူစွာ ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီ ပေးနေသော အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့စည်း တခု တည်ရှိနေပါတယ်၊ ထိုအဖွဲ့အစည်းမှာ Mohawk Valley Resource Center for Refugee (MVRCR) ဖြစ်ပါတယ်၊ MVRCR သည် နိုင်ငံတကာမှ ဒုက္ခသည်များကို ပြန်လည်နေရာ ချထား ရေး၊ အလုပ်ရရှိရေး၊ ယာယီ စားဝတ်နေထိုင်ရေး၊ ပညာရေး စသော အကူအညီများ ပေးကာ ဘ၀အသစ် ထူထောင်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးလျှက် ရှိနေပါတယ်၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကမ္ဘာ့ဒုက္ခများ နေ့တွင်လည်း နိုင်ငံတကာမှ နိုင်ငံသားများ၏ ယဉ်ကျေး မှူများကို ဒေသခံများနှင့် ရင်းနှီးမှူရရန်နှင့် ဒုက္ခသည်များ၏ ဘ၀ကို စာနာ နားလည်စေရန် ဒုက္ခသည်များ နေ့ကို ကျင်းပပေးလေ့ ရှိပါတယ်။
ယခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည် များနေ့ကို MVRCR မှ ကြီးမှူး၍ ဇွန်လ၊ ၂၆ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် (စနေနေ့) တွင် ကျင်းပ ခဲ့ကြပါတယ်၊ ယခုလို နှစ်စဉ် ကျင်းပခဲ့တာဟာ ယခုနှစ်တွင်7နှစ် တင်းတင်းပြည့် ခဲ့ပါပြီ၊၊
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လိုလို မြန်မာနိုင်ငံသားများက အကများဖြင့် ဦးဆောင် ဖျော်ဖြေလေ့ရှိပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် ကရင်အမျိုးသား အကများဖြင့် လည်းကောင်း၊ အခြားတိုင်းရားသား ပေါင်းစုံ ရိုးရာအက များဖြင့် လည်းကောင်း ဖျော်ဖြေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်၊ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် ယခုနှစ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ မပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါ သို့သော် နိုင်ငံတကာရှိ နိုင်ငံသား အမျိုးမျိုး တို့၏ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ဖက်ရှင် လမ်းလျှောက်ပွဲ ကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ကြပါတယ်၊ ယခုနှစ် အထူးအစီအစဉ် အဖြင့် ယူတီကာမြို့သို့ မကြာသေးခင်ကမှ အခြေချ နေထိုင်ရန် ရောက်ရှိလာသော ဘူတန်နိုင်ငံသား နီပေါ လူမျိုးများက ပြဇတ်တို ဇတ်လမ်း တပုဒ်ဖြင့် ကပြ ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်၊ ပွဲတော်ကို မြို့တော်ဝန်မှ ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး၊ မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မီးသတ် တပ်ဖွဲ့မှလည်း လာရောက် သရုပ်ပြခဲ့ကြပါတယ်၊ ဆေးရုံများမှ လည်းကောင်း ကြက်ခြေနီအဖွဲ့မှ လည်းကောင်း၊ မြို့ခံ လူမှူရေး အဖွဲ့ပေါင်းစုံမှလည်း သရုပ်ပြ အမျိုးမျိုးနှင့် ပညာပေး အမျိုးမျိုးဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်၊ ပွဲတော်ကို ဖြစ်မြောက်ရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့သော MVRCR မှ စက်ဘီး ၁၀ စီးကိုလည်း မဲဖောက်ပေးခဲ့ပါတယ်၊ လူဦးရေ ၂၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာဖြင့် ညနေ ၅ နာရီကျော်တွင် ပွဲတော်အား အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်း ခဲ့ကြပါတယ်။
MVRCR ၏ ကြိုဆိုရေး အဖွဲ့
နိုင်ငံတကာ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှူ အ၀တ်အစား ဖက်ရှင်ပွဲ
နိုင်ငံတကာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှူ အ၀တ်အစား ဖက်ရှင်ပွဲ
မိုးရွာနေချိန်မှာတောင် ပွဲတော်အား လာရောက် အားပေးနေကြပုံ
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကရင်နီ ညီအကိုမောင်နှမများ အမှတ်တရ
ဘူတန်နိုင်ငံမှ နီပေါလ် လူမျိုးများရဲ့ ပြဇတ်တို ဇတ်ဝင်ခန်း
မှတ်ချက် - ယူတီကာ မြို့လေးရှိ လူမျိုး/နိုင်ငံသား ပေါင်းစုံ၏ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအား ဝေမျှခြင်း သက်သက်ပါ ....
Posted by ခြေလှမ်းသစ် at 11:07 PM 1 comments
Does the Manager (Management) know who you are?
Walking into the factory, the MD noticedaguy standing against the wall and doing nothing.
He calmly said to the young man, “How much do you earnamonth?”
“I earn R2,000amonth, Sir. Why?”
Without answering, MD took out his wallet and gave him R6,000 cash ….
Saying that “Around here, I pay people for working, not for standing and doing nothing!!! Here is3months salary, now you are fired, get out and don’t come back.” The young man disappeared.
Noticing onlookers, the MD said “that applies to everybody in this company” and then he approached one of the onlookers and asked him” who is the guy I just fired?”
The guy replied …………
“HE WAS THE PIZZA DELIVERY MAN SIR”
ဂျာကြီးတွေ management အပိုင်းမှာ အရမ်းတော်တာပဲနော် ....
Posted by ခြေလှမ်းသစ် at 10:54 AM2comments